Himalaya Dainik » मुख्यमन्त्रीको यी पुराना तस्बिर अहिले किन भयो भाइरल ?
प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई एउटा आमसभामा भाग लिन २० दिनअघि संखुवासभा गएको समयको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनिरहेको छ । शेरधनकी पत्नी जाङ्मूले सो भ्रमणका तस्वीरहरु हिजो फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि तस्बिर भाइरल हुन पुगेको हो ।
संखुवासभा मुख्यमन्त्री राईको ससुराली जिल्ला पनि हो । जिल्लाको मकालु गाउँपालिकास्थित सेदुवा र नोर्बुको भ्रमणमा पुग्दा राई दम्पत्तिलाई स्थानीयवासीले न्यानो स्वागत गरेका थिए । तर, उनीहरु राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै हेलिकोप्टर चार्टर गरेर ससुराली गएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भने हेलिकोप्टर चार्टर राज्यकोषको खर्चमा नगरिएको बताएको छ । सचिवालयका अनुसार मुख्यमन्त्री गत फागुन १३ गते मकालु गाउँपालिकामा तत्कालीन नेकपाको गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको वृहत जनसभा लगायतका कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्न गएका थिए ।
जाङ्मुले फेसबुकमा लेखेकी छन् – ‘म त जन्मिएको मात्रै, मेरो गाउँ अति नै सुन्दर रहेछ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘सबैले न्यानो स्वागत र सत्कार गर्नुभयो, धेरै खुशी लाग्यो । मेरा गाउँ र ठाउँको लागि केही गर्नुपर्ने महसुस गरेँ ।’
त्यस ठाउँमा सडक, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार लगायतका पहुँच नपुगेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । यस विषयमा मुख्यमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ ।
चर्चामा साम्राज्ञीको बोल्ड लुक्स [१० तस्बिर]
फेवातालमै अस्ताए सैनिक जवान राजाराम !